"Maharitra amin'ny famonjena ny mino". Mamaramparana izany lohahevitra izany isika eto amin'ny sahan'ny FJKM , ry havana,amin'ity Alahady izay natokantsika ho fitondrana am-bavaka ny Sampana Fifohazana ity.
Koa ny Tenin'Andriamanitra izay efa novakiana htamintsika teo no hakantsika hafatra sy vatsim-panahy amin'ity maraina ity, dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 33:18-22.
Toy inona ary NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA?
I- NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA dia MATAHOTRA AN'ANDRIAMANITRA (and 18-19)
Izany fatahorana an'Andriamanitra izany indrindra no asongadin'ity Salamo ity eto am-piandohan'izao Tenin'Andriamanitra izao. Ny hoe "matahotra an'Andriamanitra" eto dia manaja Azy, tia ary mihaino sy mitandrina mandrakariva ny teniny. Tsy hoe matahotra mandositra fa matahotra mankatoa.
Ny kristianina matahotra an'Andriamanitra zany dia manao ny sitrapony. Ary raha sendra manao fahadisoana dia mahay mifona Aminy mba handraisany famindram-po. Ny famindram-po voalaza eto dia ilay fiainana be dia be raisin'izay matahotra Azy.
Izany fiainana izany no mitaona azy hiala ao amin'ny fahafatesana ary manainga azy hiala ao anatin'ny maizina ka ho ao amin'ny fahazavana mahagaga, maniraka azy hiala ao amin'ny alahelo ka ho ao amin'ny fifaliana.(and 19). Koa raha mangetaheta izany fiainana be dia be izany ianao dia manàna fatahorana an'Andriamanitra, ankatoavy Izy ary matokia Azy, manàna faharetana dia ho hitanao fa ho azonao izay irin'ny fonao. Izay no voalohany. Ny faharoa dia izao:
II- NY MPINO KRISTIANINA MAHARITRA AMIN'NY FAMONJENA dia MAHAY MIANDRY NY TOMPO (and 20-21)
Hoy ny mpanao Salamo eto amin'ny and.20 :"Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjena antsika sy ampingatsika Izy". Ny hoe "miandry" dia mifono hevitra maro. anisan'izany ny hoe :manantena, maharitra,matoky. Matoa miandry isika dia satria mbola tsy tonga izany ilay andrasana, fa mbola ho avy. Izany no fanantenantsika. Matoa koa anefa miandry isika dia midika izany fa tsy maintsy manam-paharetana isika mandra-pahatongany. Ary matoa isika miandry dia matoky isika fa ho avy ilay nandrasana ary matoky isika fa azo antoka ilay andrasana. Koa izany no iandrasantsika ny Tompo: manantena Azy isika, maharitra isika ary matoky isika fa tsy miantehitra amin'ny hazo boboka akory isika raha miantehitra Aminy.
Ny kristianina miandry ny Tompo arak'izany tokoa dia mifaly mandrakariva, araka ny and.21 hoe:"fa Izy no ifalian'ny fontsika." Ka ny olona mifaly ao amin'Andriamanitra dia mandresy ny alahelo, na inona na inona mitranga. Hoy ny tenin'i Jesoa hoe : "mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana ,fa Izaho hanome anareo fitsaharana." Fantatr'ireo Fifohazana ireo tsara izany Tenin'Andiamanitra izany ka enga anie mba hiainany tokoa!
Koa matokia Azy araka ny and.21 hoe:"satria ny anarany masina no itokiantsika." fa hiara-mandresy amin'i Jesoa Kristy koa ianao. Manantenà an'Andriamanitra dia hahazo hery ianao, ary ho falifaly lalandava araky ny hiran'i Titianah hoe: "falifaly lalandava ny miaraka amin'i Tompo, fifaliana tsy hay vidiana fa miloatra avy ao am-po."
Ary izany fifaliana izany tsy avy aiza fa avy amin'ilay Jesoa Kristy monina ao am-po. I Jesoa no foto-pifaliana tsara indrindra.Izy no Mpamonjy azo antoka indrindra.Izy no sakaiza mahatoky indrindra.Izay manana Azy no sambatra!
Eto am-pamaranana ary ,ry havana, dia mampatsiahy anao ny Tenin'Andriamanitra fa ny kristianina mifoha marina ka maharitra amin'ny famonjen'Andriamanitra dia:
- Matahotra an'Andriamanitra: dia ilay tahotra mitaona mba hankatoa, sy hanaja ary hino Azy, ka handray ilay fiainana atolotr'Andriamanitra dia ilay fiainana mandresy ny fahavalo sy ny haizina rehetra.
- Mahay miandry ny Tompo. Koa manantenà an'Andriamanitra fa hahazo hery ianao hiantrehanao ny tontolo andronao rehetra, ary handresenao miaraka amin'i Jesoa Kristy ny endri-pahafatesana rehetra.
Koa andeha ary isika, ry havana, hiaraka hanandram-peo miaraka amin'ny mpanao Salamo eto amin'ny and.22 hoe : " Jehovah ô, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenainay Anao." Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.